Nyowani CAT S31 uye S41 mafoni, mafoni akaomesesa evanoda vashandisi | Gadget nhau
Nyowani CAT S31 uye S41 mafoni, mafoni akaomesesa evashandisi vanoda
Karim Hmeidan | | Nhare mbozha, Mharidzo
Patinosarudza pamusoro tenga smartphone kana imwe, isu tinowanzo gara tichifunga kuramba kwayo. Zviripachena, kubhadhara mitengo iyo vagadziri vari kumisikidza nguva pfupi yadarika kunoita kuti titye nezve tsaona dzinogona kuita kuti zvigadzirwa zvedu zvigume zvakuvara, uye zviripachena pasina garandi.
Nekuda kwematambudziko aya, pane musika wezvigadzirwa zvinorondedzerwa semushonga, kuramba muyedzo wezvese zvinozoita kuti vakunde chero tsaona yatingave nayo. Nhasi tinokuunzira mamwe asingatombogoni, mafoni eCAT anoona huwandu hwemidziyo yakavandudzwa kuitira kuti vanhu vanodzvinyirira vagutse chishuwo chavo chekutenga chimwe chinhu chinobatsira uye chisingagone. Mushure mekusvetuka isu tinokupa iwe zvese izvo zvitsva zveiyo nyowani CAT S31 uye CAT S41, chimwe chezvinhu zvinopesana zvakanyanya pamusika pasi peCAT garandi, iyo Inotungamira inogadzira maturusi ehunyanzvi uye ekushandisa emumaindasitiri.
Sezvawaona, isu takatarisana chaiwo chaiwo mafoniKubva pakuona kwangu ivo havasi mafoni efoni ye «zvakajairika» mushandisi, inonzwisiswa seyakajairika seye mushandisi asiri kugara ari mune zvinoitika umo smartphone inogona kuratidzirwa kune njodzi. Unogona kuzviona muvhidhiyo yapfuura, hapana CAT smartphone patafura mune yekudyira, kana mumugwagwa wepasi pevhu (kunyangwe zvichinzi zvinogona kuva nenjodzi), Katsi dziri mumunda, mumakomo, mumabasa….
1 CAT S41, inomira yepakati-renji
2 CAT S31, yakachipa ine hunhu hwakaenzana
3 Ini ndinotenga iyo CAT S31 kana S41?
CAT S41, inomira yepakati-renji
Tichifunga nezvemhando mbiri nyowani dzakaratidzwa, zvinofanirwa kutaurwa kuti pasina kufunga nezveCAT S60 yakapihwa mwedzi mishoma yapfuura (iyo inozivikanwa modhi ine thermal kamera), iyi S41 inouya kuzotsiva yekare S40 uye nekudaro inotora yepakati-renji mafoni kubva kukambani: iyo S60 ichave yekumusoro-kumagumo, iyo S41 yepakati-renji, uye S31 yepasi-magumo. CAT S41 ine IP68 certification, zvese zvinobatanidza hazvisi mvura uye kunyangwe zvese zvadzivirirwa nemakepisi epurasitiki, izvi ndezvekudzivirira kunetsa-kubvisa zvinwiwa kubva pakusara mukati mechigadzirwa
Smartphone ine simba zvine processor MTK P20 MT6757 octa-core 2,3 GHz, 3 GB ye RAM uye 32 GB yekuchengetedza mukati. Uropi hunotsigirwa na Android Nougat uye zvinoenderana nezvavakatiudza, vanovimba kuti inogona kuramba ichivandudzwa pasina matambudziko kune anotevera mavhezheni eiyo Android sisitimu inoshanda. Screen ye 5 inches ne Gorilla Girazi 5, uye maererano nezvavakatiudza, inoedzwa nekudonha kwemamita 1.8 pakongiri. Izvo zvinofanirwa kutaurwa kuti hongu, ino pokana kwazvo smartphone (inodzivirira kudonha, inopesana nemvura, inopesana nemvura ...) asi ini ndingati izvozvo kana uchida kuiputsa uchaityora, ndiko kuti, inopokana netsaona dzemazuva ese, zviripachena nekuve yakavakwa mumapurasitiki ichave isingagadzike pane iyo iPhone ine magirazi anovhara.
Pasina kupokana, chimwe chezvinhu zvinonyanya kufadza nezve iyi CAT S41 ndiko mukana wekushandisa iyo 5000 naRaama bhatiri kukwanisa kubhadharisa zvimwe zvishandiso (pamwe nekugona kushandisa chimbi yekumhanyisa nekuisa iyo S41 mune yekurara modhi), ndokuti, shandisa iyo CAT S41 sebhangi remagetsi yemamwe madivayiriChinhu chinobatsira asi kubva pakuona kwangu chisinganyanyo batsira (chakakosha iyo redundancy), ndinofunga kuti pakupedzisira tinozvisunga netambo kune chimwe chishandiso kuti chibhadharise zvinopesana.
CAT S31, yakachipa ine hunhu hwakaenzana
Kuchinja iyo modhi, isu tinotarisa pane iyo CAT S31, iyo smartphone yataizokwana nayo munzvimbo yakaderera yeCAT, hongu, ine zvimiro zvakafanana kune mukoma wayo mukuru CAT S41 pamutengo wakaderera. Iyi CAT S31 ine skrini ye 4,7 inches inochengetedzwa neGorilla Glass 3 kunyangwe ivo vachitiudza kuti inoedzwawo nekudonha kweanopfuura mita imwe nehafu (ine imwechete yekudzivirira chitupa seS41). Vakagadzira processor Qualcomm Snapdragon de quad musimboti pa1,3 GHz, ichiperekedzwa ne2 GB ye RAM uye 16 GB kuchengetedza mukati. Ehe, zvakashata maficha asi pakupedzisira iwe uchazoshandisa ichi chishandiso pane chauchazoshandisa icho, kune njodzi mamiriro, saka ndinonzwa sekunge zvakanyanya kana iwe uchitsvaga isingagadzike smartphone.
Ini ndinotenga iyo CAT S31 kana S41?
Kumubvunzo wegoridhe nezvekuti kutenga kana kwete iyo nyowani CAT S31 kana S41, mhinduro yangu ndeyekuti zvinoenderana, zvinoenderana nezvinhu zvakawanda. Tiri kutarisana nemidziyo isina mutengo wakanyanyisa (384 euros yeCAT S41 uye 329 euros yeCAT S31), chimwe chinhu chingavaite chinonaka zviri pachena, asi isu tinofanirwawo funga nezvemamiriro ezvinhu ane mumwe nemumwe wedu. Ini ndinofunga chishandiso chakanaka kune chero munhu anogona kuvashandisa pabasa ravo, mabasa ayo, sezvatakataura, anoisa njodzi kumashandisirwo edu, CAT chiratidzo chechiratidzo, uye uchave nemidziyo inodzivirira.
ari CAT S31 uye S41 mamwe emidziyo yakaoma pane pamusika (usingafunge nezvekutyaira rori pamusoro pavo) uye ivo sarudzo yakanaka kana iwe uri kufunga nezve chishandiso chinogadzikana, zvikasadaro, iwe unozopedzisira watenga chero chimwe chinhu chakanyanya-kutengeswa chishandiso. Amazon neMediaMarkt ndivo vanogovera zviri pamutemo uye ivo vachasvika munyika medu mumwedzi iri kuuya, saka munoziva, ongorora hunhu uye zvido.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Nhare » Nhare mbozha » Nyowani CAT S31 uye S41 mafoni, mafoni akaomesesa evashandisi vanoda
Aya ndiwo mashandiro eWhatsApp Bhizinesi, ayo akatotanga bvunzo dzekutanga kuSpain
Iyo beta 2 yeIOS 11.1 inosvika yakatakurwa nema emojis matsva uye anonakidza